Nagarik News - 'बेड सिन दिन रमाइलो लाग्छ'
होमपेज / शुक्रबार / 'बेड सिन दिन रमाइलो लाग्छ'
'बेड सिन दिन रमाइलो लाग्छ'	23 May 2013 बिहीबार ९ जेष्ठ, २०७०
स्मिता थपलिया, अभिनेत्री
तपाईंको अर्को फिल्मले पनि एडल्ट सर्टिफिकेट पाएछ!कति फिल्म सेन्सरमै अडि्करहेका छन्। 'रोमान्स'ले एडल्ट सर्टिफिकेट पाए पनि सेन्सर त भयो नि।
सबै फिल्मले एडल्ट सर्टिफिकेट पाएपछि तपाईं पनि 'एडल्ट हिरोइन' हुनुभयो!फिल्मको कथाअनुसार चाहिने जति दृश्य दिएकी हुँ। मैले अहिले यस्तै फिल्म खेलिरहेकी छु। म कलाकार हुँ, परिस्थितिअनुसार जे पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले त्यसो भन्दा मलाई केही फरक पर्दैन। फिल्मको नामै 'रोमान्स' भएपछि बेडमा रोमान्स गरेका दृश्य पनि खुब होलान् है?श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि बाध्यताले परपुरुषसँग रोमान्स गर्नुपर्ने फिल्मको कथा छ। त्यसैले यस फिल्ममा कथाले मागेजति बेड सिन दिएकी छु। पाँच जना हिरोसँग मेरो रोमान्स सिन राखिएको छ। हिरोइन बन्न त निर्देशकले मागेजति पनि दिनुभयो होला?क्यामराअघि निर्देशकले भनेजत्तिको हट दृश्य दिन कुनै आपत्ति छैन। तर, त्यसभन्दा बाहिर गएर कसैले प्रस्ताव राख्छ भने उसले झापड खान्छ। गरम सिनमा काम गर्न गाह्रो हुँदैन?किस सिन दिन अलि गाह्रो हुन्छ। किनभने साह्रै घिन लाग्छ। तर, बेड सिन दिँदाचाहिँ रमाइलो लाग्छ।बाआमाले यो कुरा सुनेपछि 'छोरीको बिहे गर्ने बेला भएछ' भन्ठान्छन् होला!बिहे त १० वर्ष यता गर्दिनँ। बेड सिन दिँदा नै रमाइलो मान्न थालेपछि मन बाँधेर बस्न सकिन्छ त?किन नसक्नु? काममा व्यस्त भएपछि यस्तो सोच्ने फुर्सद कहाँ हुन्छ र?नेपाली फिल्मको हट हिरोइन बन्ने लक्ष्य हो?सानैदेखि चर्चित हिरोइनचाहिँ बन्न चाहन्थेँ। त्यो चर्चित हिरोइन बन्नका लागि हट सिन दिन आवश्यक देखियो, दिएँ। तर, त्यस्तो छाप चाहिँ नपरोस्। तपाईंले अभिनय गरेका 'द लास्ट किस' र 'लभ इज लाइफ' दुइटै त्यस्ता फिल्म थिए। यो पनि नाम सुन्दै त्यस्तै लाग्छ। अनि हट हिरोइनको छाप बसेन त?पहिला सानैदेखिको हिरोइन बन्ने सपना पूरा गर्छु भनेर अफर आएका फिल्म गरेँ। यो क्षेत्रमा स्थापित भएपछि त्यो छाप मेटौँला नि।स्थापित हुन फिल्म पनि चल्नुपर्‍यो, होइन र?'द लास्ट किस' चलेकै हो। 'रोमान्स' पनि चल्छ। यत्तिको फिल्म पनि चलेन भने नेपालमा फिल्म बनाउन बन्द गरिदिए भैगो नि। Tweet Leaveacomment Message *
प्रेममा सेक्स होइन इमान चाहिन्छ : हर्षिका श्रेष्ठ, अभिनेत्रीसेक्स मुभी कत्तिको हेर्नुहुन्छ?
आफ्नो कुन अंग आकर्षक लाग्छ?
अरूले मेरो आँखा सेक्सी छ भन्छन्। मलाई पनि हो जस्तो लाग्छ।
बिहेअघि सेक्स ठीक कि बेठीक?
सम्बन्धको आत्मीयता र गाढापनमा निर्भर गर्छ। एकअर्काप्रति प्रतिबद्ध र...	मर्द सिंह अर्थात् अमृतासन् ८० को दशकमा बलिउडका ठूला स्टार आफ्ना छोराछोरीलाई फिल्मी पर्दामा ल्याउने ध्याउन्नमा थिए। धर्मेन्द्र जेठा छोरा सनी देओललाई अभिनयको अखडामा उतार्ने तरखरमा थिए। उनका लागि अभिनेत्रीको खोजी भइरहेको थियो।...	जलपरीको धुवाँदार चुनौतीनेपाली पौडीलाई ११ वर्षे गौरियाले नयाँ चुनौती दिएकी छिन्। बिदा मनाउन नेपाल आएकी गौरिका १९ औँ राष्ट्रिय खुला पौडीमा सात कीर्तिमान बनाउँदै लन्डन फर्कंदै छन्। गौरिकाले सातदोबाटोमा १३ र १२...	बिहे नगरी दम्पती'लिभिङ टुगेदर' अर्थात् बिहे नगरी युवा–युवती सँगै बस्ने जीवनशैली। पश्चिमा चलन मानिने यो अनौपचारिक घरजम नेपालको शहरी समाजमा पनि सुरु भइसकेको छ। विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न जोडीहरूले भान्छादेखि बिछ्यौनासम्म 'सेयर'...	तन हङकङमा, मन नेपालमाहङकङमा फास्टफुड र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका कवि राईले केही समयअघि धरान आएर 'आमा' नामक एल्बम सार्वजनिक गरे। एल्बमका दुई गीतका म्युजिक भिडियो बनाउन ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च...	'व्यस्त भएरै बित्यो जवानी'– भुवन चन्द, अभिनेत्री
जवानीमा म न लज्जालु थिएँ, न फ्य्रांक थिएँ। अलि गम्किलो खाले बुझक्कडजस्ती थिएँ। धेरैसँग बोलचाल गरिहाल्न नखोज्ने। मेरो अनुहार हेर्दा धेरै बोल्न डराउँथे। बोलचाल भइसकेपछि भने उनीहरू...	स्क्रिप्ट सुन्दरीअघिल्लो वर्ष 'शुक्रवार सुन्दरी'का लागि कामुक अदासहितको तस्बिर खिचाएर चर्चामा आएकी जया ओझा यही शुक्रवारदेखि 'स्त्रि्कप्ट सुन्दरी'का रूपमा देखिने भएकी छिन्। शुक्रवारदेखि नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुन लागेको टेलिसिरियल 'परिबन्द'को स्त्रि्कप्ट...	छोरी स्याहार्दै रञ्जिताफिल्म 'गोर्खा पल्टन'बाट हिरोइन बनेकी र छोटो समयमै डेढ सयभन्दा बढी भिडियोमा अभिनय गरेकी रञ्जिता गुरुङ अचेल गुमनाम छिन्। विगत केही महिनादेखि कला क्षेत्रबाट पर बसेकी उनी यतिबेला भने छोरी...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...